आज जङ्गबहादुर राणाको जन्मदिन « रिपोर्टर्स नेपाल
(Thursday 22nd October 2020)
प्रकाशित मिति : ७ असार २०७७, आईतबार
काठमाडौं, ७ असार । आज जङ्गबहादुर राणाको जन्मदिन । वि.सं. १८६७ मा जङ्गबहादुर राणाको जन्म भएको थियो । बाल्यकालमा उनको नाम विरनरसिंह कुँवर थियो । गोर्खाको बोर्लाङमा जन्मिएका उनी राणा शासनका शुरुवातकर्ता थिए ।
जङ्गबहादुरले कोतपर्व मच्चाएर हिंसाबाट सत्ता कब्जा गरेको इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ । तर, उनले सुधारका धेरै काम गरेका थिए । सती प्रथा उन्मुलनमा उनले शुरुवाती भुमिका निभाएका थिए । मुलुकी ऐन ल्याउने उनै थिए ।
जङ्गबहादुर कुशल कुटनीतिज्ञ थिए । उनी बेलायत पुग्ने पहिलो एशियाली शासक थिए । बेलायत, फ्रान्स र इजिप्टको भ्रमण गरी फर्किएका थिए । त्यसपछि देशमा धेरै सुधार कार्यहरु गरे ।
जङ्गबहादुरले लखनऊको सिपाही विद्रोह दबाएर भारतमा त्यतिबेला शासन गरिरहेको बेलायती शासकलाई सघाएवापत बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरका अलावा तराईका केही भु-भाग फिर्ता लिन सकेका थिए । जङ्गबहादुर राणापछि नेपालका कुनैपनि शासकले नेपालको भुमि विस्तार गर्न सकेको छैन ।
जङ्गबहादुरको अझै श्राद्ध गरिन्छ । सरकारले नै उनको श्राद्ध गर्ने गरेको छ ।
गान्धीको आशिर्वाद सम्झेर गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्री पद त्यागेको प्रकाशमानको खुलासा
काठमाडौं, १५ असोज । नेपाली काँग्रेसका पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले आफ्ना पिता गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्री
प्रहरीमाथि गोली चलाउने भारतीय नागरिक पक्राउ
वीरगंज, ५ कात्तिक । बारा प्रहरीले हतियारसहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । बुधवार सा“झ बारा
नविल बैंकका नवनियुक्त अध्यक्ष पौडेलले लिए सपथ
काठमाडौं, ५ कार्तिक । नविल बैंकका सञ्चालक समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष उपेन्द्र प्रसाद पौड्यालले आज पद
नेपालमा भारतको चासो बढ्यो, अब के होला ?
काठमाडौं, ५ कात्तिक । नेपालमा छिमेकी भारतको चासो ह्वात्तै बढेको छ । उसले सुरक्षा चासोलाई